फौजदारी अभियोग लागेका सांसदमाथि निलम्बनको माग सहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता !::सुनौलो न्यूज
फौजदारी अभियोग लागेका सांसदमाथि निलम्बनको माग सहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता !
काठमाडौं नेकपा एमालेका तीन सांसदले फौजदारी अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको अधिकार थप कटौती गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा मस्यौदा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।
उनीहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भइ निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर संसद सदस्यता स्वत: निलम्बनमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।
मिनेन्द्र रिजालसहितका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेसले संसदीय समिति ७ वटामात्रै हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषदलाई संसदीय समितिमातहत ल्याउन नहुने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।